लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र-डा. डिआर उपाध्याय – Hotpati Media
लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र-डा. डिआर उपाध्याय
१३ आश्विन २०७६, सोमबार १२:०३ मा प्रकाशित (4 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ५ मिनेट
डा. डिआर उपाध्याय काठमाडौँ : लोक्तन्त्रको नाममा जनतालाई लुटने कामबाहेक अरू केही हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचारले देश थिलथिलो भएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सरकारले देश र जनताको नाममा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन
आज मुलुक कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ ? सायद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत यो जानकारी नहोला । ओली सरकारको यो डेढवर्षे कार्यकालमा विकास, समृद्धि र सुशासनका कुरा धेरै भए तर काम भने एउटा पनि भएका छैनन् । सत्ता स्वार्थबाहेक दलहरूले अरू केही सोचेनन् । मुलुक बर्बादीको दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । नेताहरूले राजनीतिलाई सुख सयलको पेसा–व्यवसायका रूपमा लिएका छन् ।
शक्तिको आडमा धन सम्पत्ति थुपार्ने होडबाजीमा नेताहरू लागेका छन् । नेताहरू रातारात धनि बन्दै गएका छन् । नेताहरू इमान्दार नबन्दासम्म सुशासन कायम गर्न सहज छैन । देश विकासका लागि पहिलो सर्त सुशासन हो । सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार गतिहिन देखिएको छ ।
मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन वर्तमान सरकारले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार लोक्तान्त्रिक शासन प्रणाली नै हो । यो वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउन विकास निर्माणका काममा गति लिनु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । तर अहिले सम्म सरकारले कुनै गति लिन सकिरहेको छैन । तीनै तहका सरकारहरूले जनताले सोचेबमोजिम काम गर्न सकेको छैन । तलदेखि माथिसम्म समस्यै समस्या छन् ।
लोक्तान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र आमजनतामा विश्वास पैदा हुन सक्छ । अहिलेसम्म हेर्दा सरकारको एउटा विश्वास गर्ने काम छैन । जनताका काम समयमै हुन सकेन भने लोक्तान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधान माथि नै आक्रमण हुने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । देशी विदेशी केही शक्तिहरू यो संविधान असफल बनाउन चलखेल गरिरहेका छन् । नेपाललाई पुनः संवैधानिक अस्थिरतामा धकेल्ने षडयन्त्र हुँदैछ । यो विषयमा सबै लोक्तान्त्रिक शक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अठार महिनाको समय बिताइसकेको छ । यो अवधिमा जनताले महँगीको ठूलो भार बोक्नुपरेको छ । कर वृद्धिले जनता यो सरकारबाट रुष्ट छन् । तीन तहका सरकारहरूलाई जनताले कर तिर्नु पर्नेबाध्यता उत्पन्न भएको छ । तीन तहका करको भार जनताले धेरै समयसम्म थेग्न सक्दैनन् ।
संविधानको कार्यान्वयन र सुशासनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सत्तारुढ दल र सरकारको हो । प्रतिपक्षी दललाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढने काम सरकारले गर्नुपर्छ । विकास र सुशासनका आधार बलियो बनाउँदै आमजनतालाई आशा जगाउने काम यो सरकारले गर्नुपर्छ । जनताले परिवर्तनबाट कुनै अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । देश अहिले पनि संकटको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
हिंसात्मक गतिविधि बढदै गएका छन् । आमजनतामा फेरि त्रास फैलिएको छ । यो समस्या समाधान नगरेसम्म दीर्घकालीन शान्ति कायम हुन सक्दैन । सरकारले दमन र निषेधको रणनीति अख्तियार गरे समस्या बढने देखिन्छ । देशमा गरिबी र बेरोजगारी समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बेरोजगारी समस्याका कारण धेरै युवा विदेश जान बाध्य भएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशी ऋण र अनुदानमा चलेको यो अवस्था छ । उद्योग , व्यापार र कृषि क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन ।
लोकतन्त्रको नाममा जनतालाई लुटने कामबाहेक अरू केही हुन सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचारले देश थिलैथिलो भएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार बढ्दो छ । सरकारले देश र जनताको नाममा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन । देश बनाउन स्पस्ट मार्गचित्र र कार्ययोजना हुनुपर्छ । त्यो अहिलेसम्म देखिएन ।
संविधान घोषणा गर्ने वेलामा मधेस केन्द्रीत दलहरूले संसद बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले अझै पनि यो संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूका मागलाई खासै वास्ता गरिरहेको छैन । पहिलो संविधान सभाको चुनावले संविधान जारी गर्न नसकेर दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्नुपरेको थियो । त्यहि दोस्रो संविधान सभाको चुनावले नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भयो । संविधान त्यसै निर्माण भएको होइन, यो संविधान निर्माण हुन नेपाली जनताको धेरै ठूलो त्याग तपस्या, बलिदान र सात दशक लामो संघर्षको उपलब्धि हो । लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान निर्माण भएको हो ।
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनताको हातमा छ । संविधान सभा एउटा सार्वभौम थलोबाट ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर जुन संविधान घोषणा भयो । यो आफँैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । मधेस केन्द्रित दल, मोहन वैद्य, नेत्र विक्रमचन्द (विप्लव)लगायतका असन्तुष्ट पक्षहरू पनि छन् । उनीहरूका उचित मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ । असन्तुष्टिका केही आवाजहरू छन् । त्यसलाई यही संविधानकै विधिबाटै समाधान गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
लामो समयदेखिको संघर्ष र जनताको बलमा गणतन्त्र आयो । लोकतन्त्रमा शासन पारदर्शी हुनुपर्छ । विधिको शासन अनुसार चल्नुपर्छ । अब यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । आखिर यिनै राजनीतिक दल परिवर्तनका संवाहक हुन् ।
देशको शासन, प्रशासन लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीभित्र विकृति विसंगति झाँगिदै गएको छ । राजनीतिक दलमा रहेका विकृतिहरू सुधार गरेर जानुपर्छ । राजनीतिक दलहरू सुधार्न सकेनन् भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । दलहरू गलत बाटोमा गए भने जनतामा वितृष्णा आउँछ । यस्ता कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सुधारेर जानुपर्छ । अहिले सरकारका काम कारबाहीले जनतालाई निराश बनाएको छ । जनतामा निराश आउन दिनु हँुदैन ।
जनतामा निराश बढ्दै गयो भने संविधान, व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार हुन सक्छ । त्यसो भयो भने संविधान र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने खतरा आउन सक्छ । सरकारका कामकारबाही र गतिविधिले संविधान संकटमा पर्ने खतरा देखिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । जुन संविधानको भावना विपरीत हो । यस्तै थुप्रै विधेयकहरू विवादित बनेका छन् । सरकार विरुद्धमा निराशा उत्पन्न हुने गतिविधिहरू भइरहेका छन् । जनताले आशा गरेबमोजिम संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संविधानको भावनाअनुसार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । केही तत्वहरूले संविधानलाई जोखिममा पार्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यो चार वर्षमा संविधान कार्यान्वयन पक्ष त्यति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । २००७ सालदेखि नै राजनीतिक दलले संविधानसभाको कुरा उठाउँदै आएका थिए । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा धेरै संविधानहरू बनेका छन् । तर, संविधान सभाबाट बनेको यो पहिलो संविधान हो । संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको स्रोत नेपाली जनता हुन । अवको बाटो भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्नु हो ।
समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण पहिलो सर्त हो । यो दिशामा अघि बढ्न अब ढिला गर्नु हँुदैन । मुलुकमा मधेस केन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि कायमै छ । जनजातिलगायत पहिचान पक्षधर पनि असन्तुष्ट छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको हो । राजपाले यही मुद्दालाई अघि सार्दै सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । माग पूरा नहुने देखेपछि राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । तर, सरकार गठन भएको १८ महिना बित्दा पनि यी दुई दलको माग पूरा भएको छैन । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन । असन्तुष्ट पक्षहरूलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने दायित्व प्रमुख राजनीतिक दलहरूको काँधमाथि नै छ । अहिलेको नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । जसले गर्दा मुलुकको राजनीति अघि बढ्न सकेको छैन । सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभमा तल्लीन छन् । यसले देशको भलो हुन सक्दैन । सरकारले असन्तुष्ट समूहको मागलाई उचित ढंगले सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । जनतामा उत्साह पैदा गर्न सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । अब जनतामा उत्साहको खाँचो छ ।